"Mwari aropafadze kubvisa pamuviri uye United States of America" | Apg29
Mashoko ake ari chirongwa vaiva zvinotevera:
"Kubvisa pamuviri, I vanokukwazisai!
Female Kana uchida pamuviri, ronga mumwe!
Kana uchida pamuviri, ronga mumwe!
Kana usiri pamuviri asi munofunga zvichida kuva, uye uchida kuronga pamuviri ramangwana, ronga mumwe!
Kana uine pamuviri uye anoda kuva nepamuviri, musaita.
Zviri kwauri uye hakufaniri hombe. Zviri chaizvoizvo hombe UD.som 6 Movie matikiti anenge 300. Movie matikiti muri chinhu chikuru.
Uye vakadzi usakanganwa: Une simba kupa upenyu, uye vanhu vanoda kuedza kuzvidzora.
Mwari ropafadzai kubvisa pamuviri uye Mwari aropafadze America! "
ipapo iye kuguma norwiyo nokutamba.
Izvi kwandiri somunhu kumhura Mwari uye Ishe Jesu, uyo aiva shamwari zvevana!
Pamuviri haagoni kuwana Hana mukadzi kusateerera, uye sei zviri izvi: vakadzi, vakadzi ava kuburikidza nesimba mwoyo yavo kurarama yakanaka uye rudo Amai?.
mabasa aya zvakaipa kuti nyika nyika dzakawanda kugamuchira, kutiswededza mutongo waMwari apo Ari kuenda kukumbirisa chisimba chatinoita pamusoro mwana asina mhosva, kuzvidzivirira asati aberekwa.
Yaiva mhirizhonga kuti pakupedzisira akaparirwa pemafashamo kuti vakanyura zvose kusika munhu nguva!
Kunyange akaoma uye pamutemo saka ikozvino, asi kwete pamberi paMwari soMusiki Youpenyu!
Asi kutendeuka kuna Ishe Jesu, uye kureurura zvivi zvake uye vanotsvaka Kukanganwira kwake anogona chikwereti ichi kubviswa.
Kana kwete, zvichaita kamwe pazuva rokutongwa kuva Mhosva uye kuparadzwa.
The Bible yekare yaiva chikomborero kuva nevana, uye rudo kune vazhinji sei childlessness aiva kutambura uye uchapupu kurasikirwa chikomborero.
Times uye tsika zvachinja, vakawanda zvino kuona ramangwana mwana chinhu pasingadiwi kuti anofanira kuurayiwa.
Muna 1973, kubvisa pamuviri vakava pamutemo muna America nomukadzi wacho kodzero kudzora muviri wake, zvichiguma zvikuru yakawedzera pamuviri.
Kuti apo chikwata zvakanaka kuramba upenyu uye kuchidzivisa kuberekwa hwomunhu.
In Sweden, mutemo kwakadaro 1975, uye nhasi rinoitwa 35000-38000 pamuviri gore, vanenge 10 pazuva!
(About 12 muzana ano vakawanda aborted for> 40 years)
In America, mamiriyoni 60 fetuses vakauraya nomutemo pedyo nhasi, USA kuti vagari mamiriyoni 325 nhasi. (> 20 muzana ano vakawanda aborted for> 40 years)
Kuburikidza fetus chirwere rakapiwa mukana zviito zvavo, sezvo pamberi paMwari Life Musiki ndiye umhondi, ipapo akauraya munhu upenyu, sezvo mudumbu unotii!
Mwari asati tose rimwe zuva kuzviverengerwa edu nezviito, fetuses zvose izvi pachavo kuti nyaya yavo apo vanokumbira mai vavo: "! Amai, sei ndisina kurarama"
Anonyora Kwete ichi kuzotonga, asi kuna Muka, Varna uye kutungamirira rakarasika vanhu!